Ntugharị mmekọrịta: Maka, Mgbe & Olee
Nke sitere na Ariadne Labs sitere na March 13, 2020 n'okpuru aha "Social Distancing: Nke a abụghị ụbọchị snow" | Emelitere March 14, 2020
Onye US dere edemede a, ma n'ụdị a, nwere ozi na akwụkwọ e zoro aka na US Mana ọtụtụ ọdịnaya ya ga-adabakwa na obodo na ọdịnala ọ bụla n'ụwa.
Site na Asaf Bitton, MD, MPH
Ama m na enwere ọgba-aghara gbasara ihe aga-eme n’etiti oge a na-enweghị atụ ọfụma, mechi ụlọ akwụkwọ, na ọgba aghara ọha na eze ebe niile. Dika dibia bekee lebara anya na onye ndu ndi n’ahu ike, ajuju otutu ndi mmadu juru ajuju maka uchem, aga m eweputa ya n’okpuru ihe omuma ndi nke m nwere ugbua. Ndị a bụ echiche onwe m, m na-ewerekwa usoro ndị dị mkpa dị n'ihu.
Ihe m nwere ike ikwu n’ụzọ doro anya bụ na ihe anyị na-eme, ma ọ bụ na anyị anaghị eme, n’izu na-abịanụ ga-enwe nnukwu mmetụta na mpaghara coronavirus na mpaghara. Anyị dị ihe dị ka ụbọchị iri na otu n'azụ (tali ( data US ) na n'ofè ụzọ iji kwughachi ihe dị mwute na-eme ebe ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na Europe n'oge na-adịghị anya.
N'oge a, njichi site na ịkpọtụrụ kọntaktị na ịnwale ule bụ naanị akụkụ nke atụmatụ dị mkpa. Anyị ga-agaghari na mpekere ọrịa site na mgbasa ozi zuru oke, nke na-adịchaghị mma, na ndị mmadụ zuru oke. Nke ahụ pụtara ọ bụghị naanị imechi ụlọ akwụkwọ, ọrụ (dịka o kwere mee), nnọkọ ndị otu, na ihe omume ọha, kamakwa na -eme nhọrọ ụbọchị niile iji zere onwe gị dị ka o kwere mee gaa Flatten Curve n'okpuru.
Ebe e si nweta ya: vox.com
Usoro ahụike anyị agaghị enwe ike ịnagide ọnụọgụ ndị ahụ atụnyere, ndị ga-achọ nnukwu nlekọta ma ọ bụrụ na anyị agaghị mụta ike ahụ ma nwee ike ịhapụ ibe anyị ịmalite ugbu a. N’ụbọchị niile, anyị nwere ihe dị ka ụlọ ọrụ ndị ICU ndị ọrụ 45,000 nwere mkpara mba niile, nke enwere ike ibilite na nsogbu ma ọ bụrụ ihe dịka 95,000 ( data US ). Ọbụlagodi na-agafe agafe na-egosi na ọ bụrụ na ọrịa na-efe efe ugbu a na-ejide, ikike anyị (n'ime obodo na nke mba) nwere ike ịkarị ike tupu mbido Eprel. Yabụ, otu ụzọ ga - esi mee ka anyị pụọ na nke a bụ ụdị ndị na - enyere anyị aka ịrụ ọrụ ọnụ dịka obodo iji lekọta ahụike ọha site na ịnọpụ iche.
Amamihe, na nke dị mkpa, nke ụdị ọgba aghara ndị ọzọ, mmalite, na oke njọ nke ọha mmadụ nwere ike ịchọta ebe a . Aga m agba gị ume ka ị were nkeji tupu ị gafee eserese ahụ - ha ga - akpo isi n'ụlọ banyere ihe anyị kwesịrị ime ugbu a iji zere nsogbu ga - emecha. Ihe omuma banyere ihe omuma banyere ahu na obodo nke uwa nile egosiputara anyi na ibido ihe ndi a n’oge nwere ike imetuta oke ya nti. Yabụ kedu ihe ụdị nkwaghari nke mmekọrịta a na-emetụta kwa ụbọchị, mgbe akagbuo ụlọ akwụkwọ?
Lee ụfọdụ usoro ị ga - ebido ugbu a iji chebe ezinụlọ gị ka ọ dị mma ma mee akụkụ gị iji zere nsogbu na-akawanye njọ:
1. Anyị kwesịrị ịkwali ndị isi obodo anyị, steeti na mba anyị ka ha mechie ụlọ akwụkwọ niile na oghere ọha ma kagbuo ihe omume niile na nzukọ ọha ugbu a .
Nzaghachi obodo, obodo site na obodo agaghị enwe mmetụta zuru oke achọrọ. Anyi choro uzo zuru oke n’obodo anyi n’oge ndi a siri ike. Kpọtụrụ onye nnọchi anya gị na gọvanọ gị iji gbaa ha ume ka ha mechie mmechi steeti niile. Ka ọ dị taa, steeti isii emeela otú ahụ. Steeti gị kwesịrị ịbụ otu n’ime ha. Dikwa ume ka ndi isi mee ka ha bawanye ego maka nkwadebe ihe mberede ma mee ka nnwale nnwale Coronavirus bụrụ ihe dị mkpa na nke kachasị mkpa. Anyi chọkwara ndị omebe iwu ka ewepụta ezumike ọrịa ụgwọ ọrụ na ụgwọ ọrụ enweghị ọrụ iji nyere ndị mmadụ aka ịza oku ị nọrọ n'ụlọ ugbu a.
2. Enweghị ụmụ egwu egwuregwu, nnọkọ oriri na ọ sleeụ ,ụ, ma ọ bụ ezinụlọ / ndị enyi na-eleta ụlọ na ụlọ ibe ha.
Nke a dị oke egwu n'ihi na ọ dị. Anyị na-anwa ịmepụta oghere n'etiti etiti ezinụlọ na n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu. Ọ nwere ike bụrụ ihe nwute karịsịa maka ezinụlọ nwere obere ụmụaka, ụmụaka nwere ikike iche ma ọ bụ nsogbu dị iche iche, yana maka ụmụaka hụrụ ndị enyi ha egwu naanị. Mana ọbụlagodi ị họrọ naanị otu enyi ịnwe, ị na-ekepụta njikọ ọhụrụ na ohere maka ụdị mbufe nke ụlọ akwụkwọ anyị niile / ọrụ / mmechi ihu ọha na-achọ igbochi. Ihe mgbaàmà nke coronavirus na-ewe ụbọchị anọ ruo ise iji gosipụta onwe ha. Onye choputara ile anya nke oma nwere ike ibunye oria. Sharingkekọrịta nri bụ ihe dị ize ndụ - anaghị m akwado ndị mmadụ ka ha mee ya na ezinaụlọ ha.
Anyị emeela ihe mmekọrịta ọha na eze dị ukwuu iji lebara ajọ ọrịa a - ka anyị ghara ịdị na-arụ ọrụ ike anyị site na ịnwe oke mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ụlọ ụlọ kama n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ebe ọrụ. Ọzọ - amamịghe nke oge ịdọrọ mmadụ na ibe ya bụ na ọ nwere ike mebie usoro dị n’elu, nye usoro ahụ ike anyị ka ọghara ịda mba, ma emesịa belata ogologo na ịchọrọ ogologo oge nke ịnọgidesi ike mmekọrịta ka emesịa (lee ihe nwere emezuru na andtali na Wuhan). Anyị kwesịrị ime ihe niile anyị kwesịrị n’oge ndị a, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ nwere ụfọdụ ahụ erughị ala.
3. Lezie onwe gị na ezinụlọ gị anya, ma na-elekọta anya.
Mee mmega ahụ, gaa ije / ịgbapụ n'èzí, ma nọrọ na ekwentị, vidiyo na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ. Ma mgbe ị na-apụ apụ, gbalịsie ike ka ọ dịkarịa ala ụkwụ isii n’etiti gị na ndị na-abụghị ndị ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na inwere ụmụaka, jisie ike iji ụlọ ọhaneze dịka ụlọ egwuregwu, ebe coronavirus nwere ike ibi na plastik na metal ruo ụbọchị itoolu, anaghịkwa asachapụsị ihe owuwu ndị a mgbe niile.
Outsidepụ n’èzí ga-adị mkpa n’oge ndị a pụrụ iche, ihu igwe na-aka mma. Na-apụ apụ ụbọchị niile ma ọ bụrụ na ị ga - enwe ike, mana nọpụ iche na anụ ahụ ndị na - abụghị ndị ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị gị na ha bi. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka, gbalịanụ ịme egwuregwu bọl ezinụlọ kama ime ka ụmụ gị soro ụmụaka ndị ọzọ na-egwuri egwu, ebe ọ bụ na egwuregwu na-apụtakarị iso ndị ọzọ na-emekọrịta ahụ. Na agbanyeghi na anyị nwere ike ileta ndị okenye na obodo anyị n'otu aka, agaghị m aga eleta ndị nọọsụ ma ọ bụ mpaghara ndị ọzọ ọnụọgụ ndị agadi bi na ha, ebe ọ bụ na ha nọ n'ihe egwu kachasị maka nsogbu na ọnwụ sitere na coronavirus.
Ntinye uche n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịba oke uru (ma ihe niile, ọtụtụ n'ime anyị bụ ihe ndị na-elekọta mmadụ). CDC na - enye ntuzi aka na akụrụngwa iji belata ibu a, ihe ndị ọzọ na - enyekwa usoro iji nagide nrụgide agbakwunyere n'oge a.
Anyị kwesịrị ịchọta ụzọ ọzọ iji belata ichepụ onwe anyị n'ime obodo anyị site na iji ụzọ ọma kama ịga eleta mmadụ.
4. Belata ugboro ole ị na-aga ụlọ ahịa, ụlọ nri, na ụlọ ahịa kọfị maka oge ahụ.
N’ezie njem gaa ụlọ ahịa ga-adị mkpa, mana gbaa mbọ gbochie ha ma gaa oge mgbe enweghị ọrụ ha. Tụlee ịrịọ maka ndị na-ere ihe na ị debere ndị mmadụ n'ọnụ ụzọ iji gbochie ọnụ ọgụgụ ndị nọ n'ime ụlọ ahịa n'otu oge. Cheta ịsa aka gị nke ọma tupu njem gị na mgbe ọ gachara. Ma hapụ masks ahụike na uwe aka maka ndị ọrụ ahụike - ọ dị anyị mkpa ka anyị lekọta ndị na-arịa ọrịa. Nọrọ anya n’ebe ndị ọzọ nọ mgbe ị na-azụ ahịa - ma cheta na ịkwakọba ihe na-adịghị mma na-emetụta ndị ọzọ yabụ zụta ihe ịchọrọ ma hapụ ụfọdụ maka ndị ọzọ. Ụ nri na nri dị mma karịa ịme nri n'ụlọ ebe enwere njikọ dị n'etiti ndị na-akwadebe nri, na-ebuga nri ahụ, na gị. O siri ike ịmata etu ihe ahụ ọ dị, mana ọ dị elu karịa ime ya n'ụlọ. Ma ị nwere ike ma ga - aga n'ihu ịkwado obere obere azụmahịa gị dị na mpaghara (karịsịa ụlọ oriri na ọilersụilersụ na ndị ọzọ na - ere ahịa) n'oge oge a siri ike site na ịzụta asambodo onyinye dị n'ịntanetị ị nwere ike iji.
5. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa, kewapụ onwe gị, nọrọ n'ụlọ, kpọtụrụ onye na-ahụ maka ahụike.
Ọ bụrụ n ’ọrịa, ị ga-anwa ikewapụ onwe gị na ndị ezinụlọ ndị ọzọ bi n’ ụlọ obibi gị dịka ike kwere gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ banyere ma i tozuru etozu ma ọ bụ inweta nnwale Coronavirus, ị nwere ike ịkpọ ndị otu nlekọta nlekọta gị yana / ma ọ bụ lelee ịkpọ Massachusetts Department of Public Health na 617.983.6800 (ma ọ bụ ngalaba ahụike steeti gị ma ọ bụrụ na ịnọghị na Massachusetts ). Esobidola n’ime ulo ogwu ambulat - buru ụzọ kpoo ka ha nye gi ndụmọdụ kachasi nma - nke puru ibu igha ulo ugboala ma obu ileta ihe nlere na vidiyo ma obu ekwenti. N’ezie, ọ bụrụ na ọ bụ ihe mberede eyiri 911.
Aghọtara m na e nwere ọtụtụ n'ime atụmatụ ndị a, na ha na-anọchitekwa oke ibu maka ọtụtụ ndị mmadụ, ezinụlọ, azụmaahịa na obodo. Ntugharị mmekọrịta bụ ihe siri ike ma nwee ike imetụta ọtụtụ ndị mmadụ, ọkachasị ndị na-eche ihe ọghọm n'obodo anyị. Amaara m na enwere nhazi na ahaghị nhatanha nke etinyere na gburugburu na ndaghari ntụnye mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị ga - emerịrị ihe anyị ga - eme iji kwado mmeghachi omume obodo anyị n'ebe ndị mmadụ nọ n'ụkọ nri, ime ihe ike ụlọ na nsogbu ụlọ, yana ọtụtụ ọghọm ndị ọzọ.
Amụtakwara m na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ime ihe niile. Mana anyị kwesịrị ịgbalị ike anyị niile dịka obodo, bido taa. Ime ka ihe ndi mmadu ghara idi nma, obuna site n’otu ubochi, nwere ike ime nnukwu ihe .
Anyị nwere ohere izizi ịzọ ndụ site na omume anyị na-eme ugbu a nke anyị agaghị enwe na izu ole na ole. Ọ bụkwaru ike ọha. Ọ bụkwa ọrụ anyị dị ka obodo ime ihe ebe anyị ka nwere nhọrọ mana ebe omume anyị nwere ike inwe mmetụta kachasị ukwuu.
Anyị enweghị ike ichere.
Asaf Bitton, MD, MPH, bụ onye isi nchịkwa nke Ariadne Labs na Boston, MA.
Budata PDF nke ederede
Chọrọ imelite ntụgharị? Guo ma nye aka na koodu isi . Ihe atụ sitere na opendoodles
Gịnị kpatara weebụsaịtị a? Achọrọ m ịkọrọ ndị agbata obi m nọ na France otu isiokwu mbụ. Ma ebe m maara na ha agụghị Bekee, na m chọrọ inye aka na mgbagọ mmekọrịta, m mere websaịtị a.
Weebụsaịtị a na-eji Google Ntụgharị eme ka ọdịnaya a dị n'asụsụ 109+.
Weebụsaịtị yiri nke a: https://staythefuckhome.com/ .